‘Buug Akhrista’ – Tuchel Oo Kululaaday Mar Wax Laga Weydiiyay Xaalada Timo Werner (Muxuu Ku Jawaabay?) – Garsoore Sports
‘Buug Akhrista’ –…
Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa meesha ka saaray wararka xanta ah ee sheegaya in weeraryahanka dhibtoonaya ee Timo Werner uu doonayo inuu ka tago Stamford Bridge, isagoo difaacaya qaab ciyaareedka ciyaaryahankan reer Jarmal wuxuuna u sheegay suxufiyiinta inay ‘aqriyaan buug’ taa beddelkeeda.
25 jirkaan ayaa ku dhibtooday xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee England, isagoo dhaliyay kaliya shan gool 28 kulan oo uu u saftay Blues.
Qaabkan liita ayaa keenay in dad badani su’aal ka keenaan in xiddigii hore ee RB Leipzig inuu doonayo inuu jilbaha dhulka u dhigo galbeedka London, ama uu si degdeg ah dib ugu laabto horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka.
Tababare Thomas Tuchel ayaan xaalad wanaagsan ku jirin intii lagu jiray shirkii jaraa’id ee kahor kulanka Chelsea ee Champions League-ga oo ay la ciyaarayaan Atletico Madrid, isagoo u sheegay wariyeyaasha inay ‘akhriyaan buug’, halkii ay ka akhrin lahaayeen xanta suuqa kala iibsiga.
“Jooji aqrinta, jooji aqrinta, maxaad aqrisaa? Akhriso buug,” ayuu ku qeyliyay markii wax laga weydiiyey Werner oo aan ku faraxsanayn garoonka Stamford Bridge ee kooxda Blues.
“Ma jiro buug ka hadlaya Timo Werner. Marka akhri buug.” Ayuu sii raaciyay.
Laakiin Tuchel kuma uusan dhammeyn sheekada halkaas, isagoo sii wata ayuu soo jeediyay in Werner uusan aheyn inuu ‘aad uga careysnaado’ waqtigiisa Chelsea, inkastoo uu qirtay inuusan ka fikirin ‘waxa dhici doona xagaaga ama sanadka soo socda ‘, ee ku saabsan mustaqbalka weeraryahanka.